Miverina amin’ny Laoniny i Kenya · Global Voices teny Malagasy
Miverina amin'ny Laoniny i Kenya
Voadika ny 10 Janoary 2019 15:38 GMT
Mampihomehy ny fitsimbadimbadiky ny fiainana. Firenena iray izay efa nanamorona sy nandrahona ny hanaraka ny lova navelan'ireo fanjakana tsy mahomby ao Afrika, no indro mahazo aina indray ary miverina amin'ny laoniny.
Ankehitriny dia miray indray ireo mponin'i Nairobi, izay mpifahavalo sy nanahy momba ny fiaviany ara-poko teo aloha, mba hamely ny minisitry ny governemanta ao an-toerana noho ny fanovàna ny làlan'ireo fitateram-bahoaka sy ny fanerena ny olona handeha an-tongotra lavitra be. Mivondrona ireo mpivarotra mandehandeha sy ireo mpivarotra madinika hangatahana ny fanitarana ny tsena sy ny fametrahana jiro mazava tsara ho an-dry zareo mba hivarotany amin'ny alina. Toa napetraka etsy amin'ny sisiny ny fifankahalàna ara-poko ary amin'izao dia manery ny hanatanterahana hevitra iombonana ny vahoaka, ary mizotra manohy ny fiavotana ara-toekarena.
Mitaratra io fahasamihafàna io ihany koa ireo adihevitra anaty aterineto, miahiahy momba ny Initial Public Offer (IPO) an'ny Safaricom, orinasa mpamokatra finday miroborobo sy lehibe indrindra ao Afrika Atsinanana, ireo bilaogera. Anatin'ny fifanandrinana ara-politika, mifandanja sy mitombina kokoa ireo adihevitra raha oharina amin'ny tamin'ny roa volana lasa.
Famantarana iray goavana ny fivarotana ny Safaricom fa miray ny governemanta satria mialoha ny fifidianana, tsy nanaiky ny hivarotana ireo petrabola ny avy any amin'ny mpanohitra. Ankehitriny, manohana ity orinasa manan-karena indrindra ao Kenya ity izy rehetra.
Gaga ny Kumekucha fa nivadika ny mpitarika ny mpanohitra, Raila Odinga, ary nanohana ny IPO na dia nilaza ny fanoherany izany aza nandritra ireo fampielezankevitra:
Nihaona tamin'ny Minisitry ny Fitantanam-bola, Amos Kimunya, i Raila omaly ary na dia ilay minisitra, izay vao efa-bolana monja aza izay no nilaza fa tsy tsena fivarotan-trondro ny tsenam-bolan'i Nairobi tanatinà fanafihana manokana nafenimpenina nikendry an'i Hon Raila Odinga, dia miresaka am-panajana tampoka momba an'i Raila. Tanatinà valandresaka niarahany tamin'ny mpanao gazety omaly, nanolotra an'i Raila sy ny Filoha Kibaki ho “ireo mpitarika roa antsika” izy, ny endriny toa miramirana.
Tsy fotoana fanompoana mpamonjy izao, saingy ilaina kosa ny fanazavan'i Hon Raila Odinga amin'ny vahoaka izay nahatonga io fiovam-po io. Aza diso fandraisana ahy, faly aho momba ilay firaisana sy fiaraha-miasa hita indray eo amin'ireo mpitarika roa ireo, izay nitondra an'i Kenya tamin'ny krizy ratsy indrindra sy mbola eo am-pototry ny ady an-trano. Manoloana ireo toedraharaha ireo, tena iriana mihoatra ny nóho ny zava-drehetra ny fandriampahalemana, ary tena ny zava-drehetra no tiako ambara.
……Na izany aza, ny teniko farany amin'ity raharaha ity dia na inona na inona vidiny, azoko antoka fa mahaleo ny sarany izany. Fiadanana tsara kokoa ary avelao izahay no hanefa izany. Satria tokoa tsy misy afaka hanohatra ny ain'olombelona (izay tsy misy sarany) amin'ny zavatra hafa rehetra eto ambanin'ity masoandro ity. Saingy, noheveriko fotsiny fa tokony hampahafantarina ireo Keniana.
Voafintin'ny tsikera iray ao amin'ny bilaogy Kumekucha ny olan'ny politika sy ny fandraharahàna ary ny fananiham-bohitra ao Kenya, sy ny fifandraisan'izy ireo amin'ny mahantra (maro an'isa):
Araka ilay efa nolazaiko taloha, momba ny tombontsoan'ny saranga ny politika ao Kenya. Hitanao ankehitriny ny saranga hiasan'ireo Solombavambahoaka, izy rehetra izay mikendry ny ho mpanatapitrisa maro anatin'ny 5 taona. Tongava ny 2010 dia hanomboka araka ny tokony ho izy ny ady lova, hanomboka hanohitra izay rehetra ataon'ny governemanta ry zareo…ary hivonona hitehaka azy ireo ho mpamonjy, mpitarika, maritiora antsika, sns, isika.
Manontany tena i Kenyanentrepreneur raha miraharaha ny momba ilay IPO ny vahoaka:
Na izany aza, mila mamindra ny Keniana tsotra any amin'ireo faritra ambanivohitra ny LSE mba hividy petrabola mandritra ireo IPO sy handray anjara anatin'ny tsenam-bola amin'ny ankapobeny. Ary ny tiako tenenina dia anatin'ireo tanàna ambanivohitra toy ny Githunguri, Bondo, Matuu, Kabartonjo, Mumias, Wajir, Mwatate, Mazeras, Lodwar sns sns sns.
Mila arifomba kokoa ny Keniana anatin'ireo safidiny amin'ny fampiasam-bola. Avy eo, hijanona ny adin'izy samy izy amin'ny fomba fanao tamin'ny arivo taona lasa miaraka amin'ny tsipìka sy zana-tsipìka mba hahazo poti-tany.
Mila tonga saina ireo Keniana fa afaka mampiasa vola anatin'ny Tsenam-bola any New York na dia mipetraka any amin'ny vohitra misy azy aza.
Mametra-panontaniana amin'ireo olana ara-pitsipika sy ara-pitondran-tena ambadik'ilay tolotra i Businessinfocus, manontany tena raha tokony navoaka tany amin'ny faraparan'ny taona tany ireo petrabola:
…..izany no mahatonga ny rivo-pahamaikana nofohaziny tanatin'ilay raharaha, nanonona ireo fanomezan-toky ara-ketra sy ara-bola tsy voatàna raha tsy namidy ny Safaricom. Efa potika ireto farany volana maro taorian'ny tsy nahalavorarian'ny fanatanterahana ilay varotra tamin'ny Desambra. Ampahafantarin'ireo zavamisy ao an-toerana ny fahanginan'Atoa Kimunya manoloana ireo fanomezan-toky ireo raha manohy ny varotra kosa izy. Tsy afaka miteny amin-toky amin'ireo Keniana intsony izy fa tsy ho tanteraka ireo drafitrasa na tetikasa amin'ity taona ara-bola ity raha tsy amidy eo no ho eo ny Safaricom, satria fantany fa tsy afaka ho azon'ny Tahirim-bolam-panjakana ny vola miditra anatin'ny kitapom-bolam-panjakana mialoha ny volana Jolay rehefa manomboka ny taona vaovao fandoavan-ketra.
…Avy eo, misy ilay fanontaniana ara-pitondran-tenan'ny manampahefana mikasika ny atao hoe governemanta tetezamita izay iasan'Atoa Kimunya ho Minisitry ny Fitantanam-bola mba hanaovany hetsika iray manan-danja toy izao, andro vitsy monja alohan'ny hananganana governemanta iray vaovao. Ireo fampahafantarana fa mety hanangana governemanta vaovao ny Filoha Kibaki mialoha ny faran'ity herinandro ity aorian'ny andanian'ny Parlemanta ny volavolan-dalàna dia mamela ny fiheverana manjombona fotsiny ihany fa atosiky ny tombontsoa manokana sy mpanavakavaka ny hetsik'ilay minisitra.
Nampiakatra ny Googlemap an'ilay sehatra misafotofoto izay mampiseho ireo fandaharanasa mba hany fotodrafitrasan'i Kenya ho an'ny vahoaka i Tengeza, hanopazana maso maika ny krizin'ny mpivarotra mandehandeha sy ny vahoaka izay mananontanona.